China Machinery Kugadzira uye Fekitori | PETROKING
Muchina wedu wekuzadza wave uchishandiswa zvakanyanya kurongedza uye madiki ekurongedza emabhizimusi egirisi uye girisi muChina.Izvi zvakateedzana zvigadzirwa zvinogona kuitika kubva kune hombe dhiramu (180L) kune yega yega chinzvimbo chepakati / diki bhaketi, homwe, inogona, bhodhoro Iyi midziyo yezvigadzirwa ine musoro mumwe, misoro miviri, uye mamwe mamodheru, inogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi vemarudzi ese ekuputira zvinodiwa.
1 huwandu hwakawanda: 0.2-2L 2-18L 2 kuzadza kwakaringana: ± 0.5%
12L / min (1 L dhiramu mhando rakakamurwa)
4. Mhepo inomanikidza: 0.4Mpa
5. Kushandiswa kwegesi: 0.6m3 / min
6 Simba modhi yekuendesa mota: Y160L-8 / 7.5KW
7. Zviyero; 2600 * 1800 * 2550 mm (kaviri magumo)
Kurema kweNet: 1200-1800 kg
Muchina uyu volumetric metering uye kavha muchina, iyo inoumbwa nezvikamu zviviri: zvinhu kuendesa uye kuzadza. Izvo zvikamu zviviri zvakabatana seyakazara nemapombi.
Muchina uyu mhando-ine misoro miviri, inogona kushandiswa kune calcium base, base girisi uye kunama uye zvimwe semi-mvura zvinhu zvekuzadza nekuzadza.
1 Chinyorwa chinopa chikamu:
Chikamu chinoumbwa nefuremu, silinda boka, chikuva chekusimudza uye inosimudza auger.
Nekuda kwehurombo fluidity yemafuta uye zvimwe semi-mvura zvinhu, sikuruu auger irikuchenesa mudziyo inogamuchirwa.
Paunenge uchishanda, pusha dhiramu rizere nezvinhu 180 litres muchikuva chekusimudza. Masirinda maviri anotyaira tafura yekushanda kuti isimuke. Panguva imwecheteyo, iyo auger inotenderera kuendesa zvinhu mubhariki zvichidzika zvichikwidza kumusoro uye yozvitumira kubva kuchiteshi chepamusoro kuenda kuchikamu chekuzadza.
2 Kuzadza chikamu:
Chikamu chekuzadza chinoumbwa nefuremu, yekuyera yekuzadza musoro uye yekutanga controller.
Iyo metering yekuzadza system inodzorwa nevhavha yetsoka kana ruoko-inoshandiswa dhonza vharuvhu. Iyo metering yekuzadza musoro inoumbwa nevolumetric metering silinda uye rotary vharafu.
Chikamu chezasi chepistoni cheiyo metering cylinder ine dhayeti yekugadzirisa saizi yehoriyamu, iyo inogona kugadzirisa huwandu hwekuzadza zvinoenderana nezvinodiwa.
Iyo dextral vhoriyamu yedhaini inoderera uye iyo yekuruboshwe-ruoko vhoriyamu inowedzera.
Pakutanga kwekuzadza, bhaketi (bhegi) rakanangana nechokubudisira chiteshi, zvekuti riri padyo nepazasi pebhaketi (bhegi). Panguva yekuzadza, izvo zvinhu zvinozoburitsa mweya uri mumugomo (bhegi) kubva kune yakatenderedza yemvura yekuzadza nekuyera kuyerera pasi. Panguva imwecheteyo, izvo zvinhu (bhegi) zvinodzika kuzadza kuzadza.
3 Electrical system uye pneumatic inoshanda musimboti:
Kutenderera kanager kwemuchina uyu kunotyairwa nemota. Iko kune yemagetsi yekudzora kabati kuseri kweiyo fuselage uye chafariz relay yekuwandisa kuchengetedzwa kwemota.
Bhatani rekuchinja mota rakaiswa pamberi pepaneru remuchina wekuzadza.
Pamusoro pezvimwe zvataurwa pamusoro apa pneumatic control, izvo zvinhu zvinounza chikamu chemhepo kudzora kabati pamberi pe fuselage, iyo yekuzadza chikamu chemhepo yekudzivirira system inoiswa mune yekuzadza muchina furemu.
Chikamu chekuendesa chezvinhu chinogona kuona chiito chekusimudza dhiramu, kumisa dhiramu nekudonhedza dhiramu.
Kuendesa uye kuzadza zvinodzorwa zvakasiyana, uye epamusoro uye ezasi emabharani (mabhegi) anoshandiswa neruoko.
Iyo yakadzvanywa mweya kubva kune gasi rinopa chiteshi kana mweya compressor inopinda muchina mushure mekusefa.
Yakadzvanywa mweya inopinda mu cylinder uye logic element kuburikidza neyakagurwa-vharuvhu vharuvhu, cylinder separator, kumanikidza kudzora vharuvhu, oiri yemafuta mudziyo, inodzosera vharuvhu.
Pneumatic mashandiro maitiro: iyo isina bhaketi (bhegi) iri kuenzanisa yekuzadza kamwene, vheji vheji yatanga, musoro wekuzadza unotanga kushanda, bhaketi (bhegi) inodonha zvakafanana, kuzadza kwapera, bhaketi (bhegi) rinowira kune chinzvimbo, chiyero chinodzoserwa kunzvimbo yepakutanga uye izvo zvinhu zvinofemerwa.
Nemaoko bvisa bhaketi (bhegi) wozoisa pamusoro pebhaketi (bhegi) wobva watanga vharuvhu yetsoka kune inotevera inoshanda kutenderera.
Pashure: 8 Makore Anoburitsa Hammer Grease - Petroking Ep2 Ep3 Lithium Grease 17kg Pail - PETROKING
Zvadaro: Petroking Yero Girisi Multipurpose Lithium Grease 1kg homwe
Drum Kuzadza Machine
Girisi Kuzadza Machine